Aaron Wan-Bissaka Oo Ciyaartoy Aan Premier League Ka Dheelin U Magacaabay Xiddigii Ugu Adkaa Ee Uu Ku Dhibaatooday Joojintiisa - GOOL24.NET
Aaron Wan-Bissaka Oo Ciyaartoy Aan Premier League Ka Dheelin U Magacaabay Xiddigii Ugu Adkaa Ee Uu Ku Dhibaatooday Joojintiisa
Difaaca Manchester United ee Aaron Wan-Bissaka ayaa magacaabay xiddigii ugu adkaa ee uu abid ka hor tegay intii uu garoomada ku jiray, kaas oo ay laba jeer iska hor yimaaddeen xilli ciyaareedkan.
Aaron Wan-Bissaka oo difaaca midig ka ciyaara ayay Manchester United kasoo iibsatay Crystal Palace xagaagii 2019kii, iyadoo kasoo bixisay 56 milyan oo Euro, waxaana muddadii uu joogay Old Trafford uu waajahay qaar ka mid ah weeraryahannada ugu wanaagsan.
Laakiin midka uu dhibaatada ugu badan ka mutay kama ciyaaro horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League.
23 jirkan lagu tilmaamo difaacyada ugu adag booskiisa ee xilli ciyaareedkan wacdaraha ka dhigaya garoomada, waxa uu bilowgii fasalkan qayb ka noqday kulankii Champions League ee ay kooxdiisu kusoo garaacday PSG oo ay ugu tageen Fransiiska.
Intii ay socotay ciyaartii Parc des Prince, Ole Gunnar Solskjaer ayaa bandhig cajiib ah ay kooxdiisu samaysay, waxaanay kusoo badiyeen 2-1, laakiin kulankii labaad ee Old Trafford ka dhacay ayay kooxda reer Paris burburisay United iyagoo ku garaacay 3-1, taas oo sabab u noqotay in Red Devils ay wareeggii group-yada kaga hadho Champions League.
Aaron Wan-Bissaka oo labadan kulanba ciyaaray ayaa waxa la weydiiyey ciyaartoygii ugu adkaa ee abid uu ka hor tegay, iyo sidii uu ugu dhibaatooday qabashadiisa, waxaanu markiiba lasoo booday laacibka reer Brazil ee Neymar.
Isagoo ka jawaabayay su’aal ahayd inuu sheego magaca ciyaartoygii uu dhibaatada ugu badan ka mutay sidii uu joojin lahaa, waxa uu Aaron Wan-Bissaka yidhi: “Waxaan odhan lahaa waa Neymar.
“Waa ciyaartoy loollan badan, laakiin mar walba waan la taagnaa waanan ku raaxaysanayey inaan la xafiiltamay, khibradda ahaan, inaan la ciyaaray isaga. Wax badan ayay ii ahayd.”
Aaron Wan-Bissaka ayaa intaas kmaddib la weydiiyey sidii uu u joojin karay Neymar, waxaanu yidhi: “Waan ka fikiray, waxaanay ku xidhan tahay halka uu ka imanayo (halka uu ka ciyaarayo)
“Waa ciyaartoy jecel in qalad lagu galo, anigana, haddii aan ka hor tegayo, shaqadaydu waa in aanan qaladba ku gelin, sababtoo ah isaga ayaa doonaya (in qalad lagu galo).”